သင်ကပဲရစ်ရန်ဆောင်းရာသီများတွင်ခရီးသွားလေ့ကငျြ့သငျ့ပါအဘယ်ကြောင့် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > သင်ကပဲရစ်ရန်ဆောင်းရာသီများတွင်ခရီးသွားလေ့ကငျြ့သငျ့ပါအဘယ်ကြောင့်
ပဲရစ်အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ရထားခရီးသွားအများအပြားအခွင့်အရေးနှင့်တကွကြွလာ. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, ဒါကြောင့်သွားလာရန်အရှိဆုံးအဆင်ပြေလမ်းဖွင့်. အဆိုပါထိုင်ခုံကျယ်ဝန်းရှိပါတယ်, သငျသညျခွင့်ပြု ပိုပြီး legroom သင်တစ်ဦးအပေါ်အလိုတခုတည်းထက် လေယာဉ်. ရထား Going ကိုလည်းတစျဦးဖွစျသညျ သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုရလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းတွေ, အထူးသဖြင့်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအတွင်းမှာ.
ဆောင်းတွင်းလအတွင်းတိုက်ကြီး၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသတိရပါ. မိုးပွင့်, ကွမ်းခြံကုန်း, နှင့်အပူချိန်အေးခဲ ဒါဟာစိန်ခေါ်မှုစေနှင့် ကြောက်မက်ဖွယ် ယာဉ်မောင်းသွားလာရန်အဘို့အ လမ်းများ. ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်ကားဖြင့်ခရီးသွားလာချမ်းရာသီဥတုနှင့်ရေခဲအဝေးပြေးလမ်းမကြီး braving ဆိုလိုတယ်. အဆိုပါလမ်းများချောများမှာ, နှင့်ကားတစ်စီးသို့မဟုတ် ဘတ်စ်ကား ထိန်းချုပ်မှုထဲကလျှောစေခြင်းငှါ.
မည်သို့ပင်အဆိုပါ dreary ၏, အေးစိမ့်သောရာသီဥတု, ပဲရစ်အိပ်မက်ဖြစ်နေဆဲ ဦးတည်ရာကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံး. ပဲရစ်ရုံကြောင့်အေးသောရာသီဥတု၏ကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးသမျှသောသူတို့အပျေါထှကျလက်လွတ်ရန်မလိုအပ်ရှိပါတယ်. သငျသညျသွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာဖြစ်ပါသည် ဆောင်းရာသီအတွက်ပဲရစ် အဘယ်ကြောင့်မီးရထားခရီးသွားလာအဲဒီမှာ get ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်:
ပဲရစ်မှာဆောင်းရာသီဒီဇင်ဘာလနှင့်အကြားကျရောက် ဖေဖေါ်ဝါရီလ. အတော်များများကပဲရစ်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အကောင်းဆုံးကြိမ်အကြားဖြစ်ကြောင်းငြင်းခုန်ကြလိမ့်မည် ဧပြီလ နှင့်ဇွန်လ. သို့သျောလညျး, အဘယ်သူမျှမအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ပဲရစ်ကြောင်းရှိငြင်းပယ်ရဲ့ မှော်.
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, အလင်း၏စီးတီးတစ်ဦးအသွင်သို့ပြောင်းလဲသွားသည် ဆောင်းရာသီ Wonderland. အဖြစ်အစောပိုင်းနိုဝင်ဘာလအဖြစ်, မြို့သူမြို့သားအံ့မခန်းဝင်းဒိုးကိုပြသမှုနှင့်အတူတောက်ပနှင့်တောက်ပ beams ခရစ္စမတ် သစ်ပင်များ. မှိတ်အလင်းအိမ်မီးခိုးရောင်မိုးကောင်းကင်မှမတူဘဲပြောင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ. ပဲရစ်မှာရေခဲပြင်စကိတ်စီးခြင်းစတဲ့အိပ်မက်ဖြစ်ပါသည်. သင်က Eiffel မျှော်စင်မှာကို set up တရားရုံးပင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်.
ဇန်နဝါရီလနှင့်ဖေဖော်ဝါရီလလည်းပဲရစ်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်များဖြစ်ကြောင်း ပြတိုက်. ဆောင်းတွင်းလအတွင်း, တိုတောင်းဖြစ်ကြောင်းပြတိုက်ပေါ့ပါးဖြစ်ကြောင်းလူအစုအဝေးနှင့်လိုင်းများကိုခံစား. ပြီးလျှင်ခင်ဗျား အားလုံးအကြောင်းတွေက, ပဲရစ်ကတစ်နှစ်ပတ်လုံးအဘို့အလူသိများသည်. လည်း, သင်တစ်ဦးအကြောင်းနားလည်တဲ့နေလျှင် စျေးဝယ်သူ သူကအကောင်းဆုံးစျေးဝယ်အပေးအယူရဖို့လိုလား, ဆောင်းရာသီအရောင်း ပဲရစ်မှာနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ဖေဖော်ဝါရီလမှတဆင့်ဇန်နဝါရီလကနေ run. ဆောင်းရာသီလလည်းရှိပါသည် အဆိုပါဟိုတယ်များမှာဆက်နေရန်စျေးအချိုဆုံးအချိန် သူတို့နှစ်စဉ်ဒီအချိန်အတွင်းမှာလျှော့တဲ့အခန်းခနှုန်းထားများပူဇော်အဖြစ်.
သငျသညျပဲရစ်မှရရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရှာနေခဲ့လျှင်, သငျသညျမီးရထားခရီးသွားလာပါကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုကြောင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ် အငြိမ့်များနှင့်အဆင်ပြေ. သငျသညျဥရောပ၌နေသောသို့မဟုတ်ဖြစ်ကြသည် ဥရောပမြို့ကနေပဲရစ်ခေါင်းနှစ်လုံး, မျိုးစုံ မြန်နှုန်းမြင့်ရထား နေ့ရက်တိုင်း၌၎င်း, ပဲရစ်မြို့မှထွက်သွား. အောက်ပါစာရင်းထဲမှာသင်ရရှိနိုင်သောအများအပြားမြန်နှုန်းမြင့်ရထားတဦးကိုရွေးချယ်ကြသောအခါသင်တို့ကိုဥရောပရဲ့ကြီးမားတဲ့မြို့ကြီးများအချို့ထံမှပဲရစ်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်လျင်မြန်စွာပြသ:
Eurostar အပေါ်ပဲရစ်မှလန်ဒန် -2နာရီနှင့် 23 မိနစ်များ
ပဲရစ်အမ်စတာဒမ် Thalys အပေါ် –3နာရီနှင့် 20 မိနစ်များ
IC အပေါ်ပဲရစ်ဘရပ်ဆဲလ် - 1 နာရီနှင့် 35 မိနစ်များ
IC အပေါ်ပဲရစ် Utrecht -3နာရီနှင့် 32 မိနစ်များ
Thalys အပေါ်ပဲရစ်ရော့တာဒမ် -2နာရီနှင့် 40 မိနစ်များ
သငျသညျလျော့နည်းဘို့ပဲရစ်သွားရောက်လိုပါက, အကောင်းဆုံးကိုလက်မှတ်စျေးနှုန်းများကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်. ကြိုတင်မဲအတွက်သင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေကိုဝယ်ယူပိုကောင်းအပေးအယူရတဲ့ဆိုလိုတယ်. ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကိုသင်ကူညီပေးရန်ဖြစ်ပါသည် ပိုက်ဆံကယ်တင် နှင့်အချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးရှင်းသောဘွတ်ကင်ဖြစ်စဉ်ကိုနှင့်အတူ, ယခုလုပ်ဖို့ကျန်ကြွင်းရစ်သောတစ်ခုတည်းသောအရာပေါ်တွင်သင်၏ရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည် SaveATrain.com
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့်ကိုလင့်ခ်နှင့်အတူခရက်ဒစ်ပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-winter-paris%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / က de သို့မဟုတ် / ru နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / nl ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#traveleurope europeantravel europetravel longtrainjourneys trainjourney Tranride ရထား ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးစဉ် travelfrance travelparis